May 3, 2007, 5:26 am Filed under: General AungSan လင်း တအားဖျားနေလို့ အွန်လိုင်းမတက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် .. ။ သတိရနေတဲ့ အားပေးတဲ့ မောင်နှမ မိတ်ဆွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် .. ။ စိတ်ပဲရှိပြီး လူက အွန်လိုင်းမရောက်နိုင်ဖြစ်သွားရတယ် .. ။ ရာသီဥတု ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတာနဲ့ ၊ လင်းကလည်း နဂိုကတည်းက လူက ခံနိုင်ရည်က များများနဲ့ တခါတည်း ဖျားလိုက်တာ လူက မထနိုင်တော့ဘူး .. ။ လည်ချောင်းတွေကလည်း နာလိုက်တာ အသံတောင် ထွက်မရလို့ ငါ အ များ အ သွားပြီလားလို့ စိုးရိမ်ရသေးတယ် ဟိး .. ။ မျက်လုံးဖွင့်တာနဲ့ လူက မျက်ရည်ကျချင်တယ် .. ။ စိတ်ညစ်တယ် .. ။ အခုမှ သက်သာသွားလို့ လိုင်းပေါ် အမြန်ပြေးတက်လာတာ .. ။ ဘလော့ခ်မောင်နှမတွေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို လွမ်းတယ် .. ။ မိုးရွာလိုက် ၊ နေပူလိုက် ၊ တနေ့တည်း ရာသီဥတု ၃ခုလောက်ပြောင်းနေတာ လူလည်း ငခြောက်ပြားဖြစ်နေပါပြီ ဟူးးးးးးးးးးးးး ။ နေမကောင်းဖြစ်ချိန်မှာ ဂရုစိုက်တဲ့ မေမေနဲ့ဖေဖေ ၊ အချိန်ပြည့် လိုချင်တာ လုပ်ပေးတဲ့ ၊ အလိုလိုက်တဲ့ ကိုကို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ။ စားတာ သောက်တာကအစ ၊ အသေးစိပ် အကုန်ဂရုစိုက်ပေးတဲ့ ကိုကို့ကို ပိုကျေးဇူးတင်တယ်နော် … ။ အခုတော့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာရေးဖို့ ဦးနှောက်က အကြံမထွက်သေးတာနဲ့ အရင်တပတ်က စာရိုက်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကိုပဲ အားလုံးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် …. ။
“ကြည် ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြားစားချင်တယ်”
ဥပမာ ဇူလိုင် ၊ ၉၄ထုတ် “နွယ်နီ” မဂ္ဂဇင်းမှ ကျွန်တော်၏ “ငါးမူးတန်းမှ ရုပ်၇ှင်ကြည့်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း” ဆောင်းပါးဆိုလျှင်လည်း အထက်ပါယူဆချက်အရ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စသာဖြစ်၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ရေးသားဟောပြောရာ၌ အသုံးမပြုသင့်ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်နေပါသည်။ ၀ါရင့် သမိုင်းပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးကမူ ယင်းအယူအဆကို လက်မခံပါ။
ဤသို့ သမိုင်းပညာရှင်ကြီးက ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပုံကို ကြားနာမှတ်သားရဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါးတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သဘာဝစရိုက်ကို ခန့်မှန်း၍ ရနိုင်မည့် ကျွန်တော်၏ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်အချို့ကို ဖော်ထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ ဥပမာဆိုလျှင် —- ၁၉၄၆ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဗြိတိသျှဘုရင်ခံထံမှ အစိုးရအဖွဲ့ အာဏာကို လွှဲပြောင်းလက်ခံယူပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းရှိ အတွင်းဝန်ရုံး (ယခု ၀န်ကြီးများရုံး) သို့ နေ့စဉ်ရုံးတက်ခဲ့ရပါသည်။
ဤသို့ပြောတော့မှ ကျွန်တော်လည်း သက်ပြင်းချနိုင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရှိရာသို့ ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ ပလာတာနှင့် ခပတ်နှစ်ပွဲရောက်လာသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်သည် ဆာလောင်နေဟန်ဖြင့် စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောဘဲ အားရပါးရစားပါတော့သည်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ပန်းကန်မှ နှိုက်စားရင်း ဗိုလ်ချုပ်ကိုကြည့်ပြီး ၀မ်းသာမိသည်နှင့်အမျှ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို မရရအောင် ကြိုးပမ်းယူရန် အားမာန်အပြည့်နှင့် ဆုံးဖြတ်ထားသူ ကျွန်တော်တို့၏ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် လူသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် သနားစရာ ကောင်းလှသည်ပါတကားဟု စိတ်ထဲမှကျိတ်၍ မှတ်ချက်ချမိသည်။
May 3, 2007 @ 4:09 pm Reply	Hi Lin Let Kyalsin,
Comment by Gu Gu
May 5, 2007 @ 10:50 pm Reply	ဒီစာဖတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားမိတယ်။ ကိုယ်နဲ့ စိတ်သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်တော့လည်း အထူးအံ့သြမိပါတယ်။
May 7, 2007 @ 1:42 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI